Somaliland oo sheegtay in ay ka laabatay wada-hadallo loo ballansanaa ee iyaga iyo dawlada federaalka, shuruudna ku xirtay. – Radio Daljir
Hargaysa, Apr 19 – Maamulka Somaliland ayaa diidmo galiyey wada-hadallo siyaasadeed oo loo ballansanaa in ay dhaxmaraan iyaga iyo dawladda federaalka, kuwaasi oo la filayey wakhti dhaw in ay furmaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland Maxamed C/llaahi Cumar oo maanta la hadlay warfidiyeennada, ayaa sheegay Somaliland in ay ka laabtay qorshihii wada xaajood ee ay wada gali lahaayeen dawladda federaalka iyo Somaliland, kaasoo labada dhinacba ay magacaabeen dhawaan guddiyadii uga qayb noqon lahaa.
Wasiir ayaa sababta ka laabasho ee wadahadalladaasi ku macneeyey in ay salka ku hayso, ergooyinka ay magacawday dawladda federaalka oo uu sheegay in ay ka mid yihiin xubno ka tirsan maamulka Puntland, taasoo uu sheegay in ay hareer marsan tahay hannaankii guddi ee la isku ogaa.
Md. Maxamed C/llaahi Cumar ayaa sheegay maamulka Somaliland in uusan ogalaan doonin furmidda wada xaajoodkaasi illaa iyo inta xubnaha wasiirrada ah ee Puntland ka tirsan ay qayb ka ahaanayaan wadahadalka labada dhinaca.
Xubnaha maamulka Somaliland ay ka biyo diideen ayaa ah wasiirrada Qorshaynta iyo Arrimaha gudaha ee Puntland oo ka soo kala jeeda gobollada Sool & Sanaag, kuwaasi dawladda federaalku ku dartay xubnaha uga qaybgalaya la hadalka Somaliland, kuna socda magac federaalka maadaama Puntland ay ka mid tahay dawladda TFG-da.
Puntland ayaa hore ugu baaqday dawlada federaalka in Puntland ay qayb ka ahaato wada-hadalallada siyaasadeed ee dawlada federaalku ay la galayso Somaliland.
Wali wax war ah kama soo bixin dhinaca dawladda federaalka, kamana aysan hadlin diidmada Somaliland kala hortimid guddigii ay u magacawdeen arrinta wadahadalka.